Tsara ve ny bisikileta mamirapiratra? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Famerenana bisikileta marevaka - ny fomba fikirakirana
Famerenana bisikileta marevaka - ny fomba fikirakirana
Tsara ve ny bisikileta mamirapiratra?
Raha fintinina, nyBisikileta marevaka MamiratraBisikileta Co-l-Train diaLEHIBE. Ny ankamaroan'ny fanadihadiny dia tsara. Iray amin'ireo mampiavaka azyizany vemitsoraka eo ambonin'ireo lalana malama na be lalana. Misaotra ny endriny sy ny forkam-boasary, izay mitazona ny bisikileta milamina sy mananaLEHIBEfitrohana hatairana.10.03.2021
tsy maintsy nanitsy ny freins aloha izahay mba hahazoana antoka fa mandeha io, satria tsy manam-pahaizana momba ny bisikileta aho, mamporisika ny zanako lahy hitondra ny bisikileta ho any amin'ny fivarotana voamarina koa aho mba hahazoana antoka fa voalamina tsara ny freins ankehitriny, safidy hafa ho an'ny fandefasana entana atolotry zareo ny antso velophix ny fanaterana an-trano mazàna dia mekanika voamarina no hanangona ny bisikileta ho an'ny 100, ary koa ny manan-tsaina manana modely telo samy hafa hisafidianana ny zanako lahy nahazo ny maodelin'i Cooper ho 400 dôlara fotsiny izay tsy dia ratsy amin'ny kalitaon'ny bisikileta mamiratra manana L-train koa. maodely izay manana peratra fito ho an'ny dia lavitra kokoa an'ny mpandeha lavitra, ny fahatelo dia ny maodely Carmen miaraka amina girara telo ary maro hafa Ny famolavolana ho fampiononana bebe kokoa noho ny fametahana ny kodiarana teo aloha no niainantsika, tsara toa ny bisikileta ary mihazakazaka tsara Ny zanako lahy nisafidy ny loko maitso ny Cooper ny maodely dia misy girara telo. Ny fitaovam-piadiana voalohany dia natao ho an'ny fitaovian'ny tendrombohitra 2 no fitaovana voalohany ho an'ny tany fisaka ary ny fitaovana 3 dia tokony hahazo hafainganam-pandeha bebe kokoa. Ny bisikileta milanja manodidina ny 25-27 pounds Izahay dia nanandrana ny bisikileta ary izahay eels mahafinaritra Mahafinaritra ny seza fa manana ny fakantsariko Dji Osmo Pocket aho taloha handraisana an-tsoratra ny lahatsoratra raha mitondra fiara Manantena aho fa nankafizinao ity famerenana ity, raha tianao ity lahatsoratra ity azafady tsindrio ny bokotra Subscribe and Like ary tsindrio ihany koa ny fampandrenesana lakolosy etsy ambany hampahafantatra anao vaovao ireo Fampandrenesana no hampandrenesina. Mampidira lahatsoratra vaovao indray mandeha isan-kerinandro
Aiza no anaovana bisikileta mamirapiratra?
Ohatrinona ny lanjan'ny lamasinina L mamiratra?
mamirapiratraNy bisikileta dia amboarina am-pelatanana ao amin'ny trano fanamboarana matanjaka sy matanjaka amin'ny rivotra any Taiwan. Niezaka mafy izahay nitady ireo mpiara-miasa amin'ny orinasa mpamokatra entana mifantoka amin'ny asa etika.
Ho an'ny firy taona no firy?
Amin'ny ankapobeny, ny taranja ataonay dia natao hahatonga ny matematika, siansa ary siansa informatika hahafinaritra sy hifandray amin'ny olonataona10 hatramin'ny 110. Izany dia mitaky anao ho 13 na mihoatra ianao mba hanana ny kaontinao manokana.
SciShow Space dia tohanan'ny Brilliant.org. Ny zavatra iray tsy azon'ny olona atsahatra tsy atao dia ny mamantatra hoe avy aiza isika ary nahoana no misy antsika.
Io no lohahevitra lehibe iray ho an'ny fantsona hafa. Ireo filozofa sy mpahandro masaka dia mbola miasa amin'ireo fanontaniana ireo, saingy ny siansa dia afaka mamaly zavatra iray farafaharatsiny: rehefa nanomboka izao tontolo izao. Ary amin'izao fotoana izao dia matoky tanteraka isika fa ho eo alohan'ny 13 eo ho eo, nitranga ny The Big Bang 8 lavitrisa taona lasa izay.
Tsy mora ny nahita azy io, ary nety ho nihatsara ny vinavinany, saingy noho ny fitaovana ilaina sy ny matematika marobe, dia manomboka tsara tokoa izahay. Mba hikajiana ny taon'izao tontolo izao dia mampiasa fitaovana na porofo roa lehibe ireo astronoma. Ny voalohany dia intuitive be: mitady zavatra taloha ianao.
Matetika, midika izany fa mijery zavatra izay tena lavitra izy ireo. Hitanareo, efa nihanaka be izao rehetra izao hatramin'ny Big Bang, ka ireo zavatra tranainy indrindra dia avy tany amin'ny tany nandritra ny an'arivony tapitrisa taona maro. Ary arakaraka ny halaviran'ny zavatra iray, ny astronoma dia afaka mahazo an-tsaina ny taonany.
Hatreto, ny mpikaroka dia afaka nampiasa sary toy ny avy amin'ny Hubble Space Telescope hamantarana ireo cluster kintana hatramin'ny faha-13,2 miliara taona! Saingy tsy fantatr'izy ireo fa efa antitra ny kintana amin'ny fijerena azy ireo fotsiny. Raha te hahalala dia mila mandinika ny fomba mahafinaritra sy hafahafa mitondra tena ianao.
Jereo ny fanitaran'izao rehetra izao, manitatra ny onjan'ny hazavana mandalo azy koa izy. Ka rehefa mifindra miala amin'ny Tany ny kintana dia mihinjitra ny hazavany ary manana halavana lava kokoa mandra-pahatongany amintsika. Izy io dia fantatra amin'ny anarana hoe redshift.
Amin'ny fahitana ny ahitatra na fivoarana mena, dia hazavan'ny kintana iray, ary miaraka amin'ny matematika kely dia ahafahan'ny astronoma mahafantatra ny halaviran'ny halaviran'ny kintana. Saingy tsy izany ihany no fitaovana ampiasain'izy ireo satria na dia hitantsika aza ny zavatra sasany izay lavitra dia lavitra, ny hafa kosa mbola tena sarotra ny mandinika ireo lavitra be ireo. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana dia milaza fotsiny isika fa ny oniversite dia tokony ho 13,2 miliara taona farafahakeliny.
Mba hanatsarana ny tombana, ny astronoma koa dia mampiasa fandrefesana ny fanitaran'izao rehetra izao mihitsy. Fantatray fa nivelatra hatramin'ny faran'ny taona 1920 izao tontolo izao, fa ny fahatakarana ny fomba itomboany dia tena ilaina indrindra. Ny fahafantarana ny faingam-pandehany manitatra dia mitranga, ary ny fiovan'ny hafainganam-pandehany, dia mamela ny mpikaroka hiasa miverina manomboka izao mba hahalala hoe oviana marina izao tontolo izao no voa kely amin'ny zava-drehetra.
Toy ny hoe ahoana no ahafahan'ny mpahay siansa forensika mandinika ny tranokala misy ny fipoahana ary milaza aminao hoe rehefa maty ny baomba. Amin'ity tranga ity, amin'ny baomba lehibe kokoa ihany. Zava-baovao roa lehibe nanampy anay hahatakatra ity fanitarana ity.
Ny voalohany dia ny Type Ia supernovae, izay nipoitra avy tamin'ny fipoahan'ny kintana fotsy dwarf kely iray ary namana hafa iray hafa. Tamin'ny taona 2011, ekipa mpahay siansa iray nahazo loka Nobel tamin'ny fampiasany azy ireo hanaporofoana fa miroborobo haingana izao rehetra izao. Ireo supernovae ireo dia tena mamirapiratra ary ny famirapiratany dia mitovy daholo. ny iray amin'izy ireo dia hitovy amin'ny tsirairay.
Izay no mahatonga azy ireo tena tsara amin'ny fanaovana kajy ny halavirana, na ilay antsoin'ny astronoma hoe labozia mahazatra. Satria fantatsika ny tokony hamirapiratan'izy ireo amin'ny halavirana iray, na an-tapitrisany na miliara tapitrisa taona ny elanelany, dia mora ampiasaina amin'ny fandrefesana izy ireo. Ary taorian'ny fandrefesana an-taonany maro dia hitan'ny astronoma fa kely kokoa noho ny tokony ho an'ny vahindanitra lavitra be ireo fiovana mena ho an'ireto supernova ireto.
Midika izany fa rehefa avy namoaka ny hazavany ireo supernovae dia nifindra lavitra lavitra ny tany noho ny nandrasana izy ireo. Izao rehetra izao dia azavaina tamin'ny alàlan'izao rehetra izao izay mihamitombo haingana kokoa mandritra ny taona maro, na dia tsy azontsika antoka aza ny antony. Saingy nanampy anay hahatakatra izany rehefa nitranga ilay big bang.
Talohan'ny nahalalantsika fa miitatra izao rehetra izao, dia mety ho tsy marina ny kajikajiantsika momba ny taonany. Ny astronoma taloha dia nihevitra ny tahan'ny fanitarana tsy tapaka, ka raha nihemotra ianao tamin'ny lalanay ankehitriny dia ho tanora loatra izao rehetra izao. Na, raha maka labozia manara-penitra ratsy ianao dia hahazo fandrefesana tsy marina ihany koa.
Ohatra, ny kajy voalohany nataon'i Hubble tamin'ny taona 1920 dia nampiasa karazana kintana antsoina hoe Cepheid variable toy ny labozia mahazatra, milaza fa efa ho 2 miliara taona izao tontolo izao. Izay tena tsy mety. Ny siansa dia dingana iray.
Na eo aza izany dia tsy ny Type Ia supernovae irery no nandinihantsika ny fomba fihanaky izao rehetra izao. Ny fomba iray hafa nahitanay ny tahan'ny fanitarana dia amin'ny Cosmic MicrowaveBackground, na CMB, ilay tara-pahazavana mahery vaika izay avy tao amin'ny Big Bang Well, tsy dia mahery vaika io, 2,7 Kelvin, na -270 degre Celsius.
Saingy tsy 2,7 ​​Kelvin na aiza na aiza! Ary tena mahasoa antsika izany! Ireo fiovaovan'ny maripana ireo dia afaka mamakivaky io fivezivezena amin'ny zavatra io sy ny hakitroky ny etona eto amin'izao rehetra izao, izay samy ampiasaina hikajiana ny hafainganan'ny fititaran'izao rehetra izao. Ary miaraka amin'ny ty z.
B. Supernovae, ireo fandalinana ireo dia namela anay hanana sary marimarina kokoa momba ny fitomboan'izao rehetra izao hatramin'ny nanombohany. Io dia ahafahantsika mametraka ny tombana amin'ny taona misy antsika ankehitriny ho 13,8 miliara taona ho aotra.
cervelo r5 lanja mavesatra
Ary ny fanamarihantsika dia mihatsara ihany manomboka izao! Heverinay fa 13.8 miliara dia matanjaka, saingy aza gaga raha maheno fa miova kely ity isa ity rehefa mandinika tsara kokoa isika, midika fotsiny izany fa mihatsara eo amin'ny siansa isika. Raha miresaka momba ny CMB, Brilliant.org dia manana lesona ao amin'ny vondrona astronomian'izy ireo izay mandrakotra bebe kokoa ny zavatra nampianarin'ity tara-pahazavana ity ho an'ny mpahay siansa momba an'izao tontolo izao.
Ary tena mahafinaritra satria ny fanontaniana rehetra dia mahatonga anao hamaha olana mavitrika. Andao hojerentsika raha nisy zavatra nianarantsika tamin'ny zavatra rehetra nataoko, dia milaza izany aminao fotsiny aho. Haka ny quiz eto amin'ny studio aho, saingy nametraka rohy koa ny Brilliant.org hahafahanao mizaha maimaimpoana ny fahalalanao any an-trano.
Azonao jerena ao amin'ny brilian.org/SciShowSpaceCosmology Toy ny amin'ny Quizze Ingenious rehetra, ity dia manomboka amin'ny fampahalalana bebe kokoa momba ny famahana ireo olana ireo. Ity quiz ity dia manomboka amin'ny fanazavana ny CMB amin'ny antsipiriany bebe kokoa alohan'ny hikatsahantsika mamaly fanontaniana.
Ny iray amin'ireo zavatra tiako momba ny Brilliant dia ny tsy hoe mifototra amin'ny lahatsoratra hiarahanao miasa fotsiny, fa manana sary mahatalanjona toa an'ity karatra ity ianao. Tsy vitan'ny hoe manampy ahy hahafantatra ilay olana ezahiko hovahana izy ireo, fa manome ny tontolon'izay rehetra resahin'izy ireo amin'ity quiz ity ihany koa, ary manampy ahy hahatakatra tsara kokoa izany, fa hitazona ihany koa izany fampahalalana maharitra sy faly eo amboniny. Ka zahao ho anao ny quiz ary ampahafantaro anay ny fahasalamanao amin'ireo hevitra etsy ambany.
Maimaimpoana maimaimpoana tokoa ity quiz ity hilalaovanao, ka harary amin'izany. Ary ireo 200 voalohany nisoratra anarana tao amin'ny brilian.org/scishowspace dia mahazo fihenam-bidy 20% amin'ny famandrihana premium isan-taona ary manohana an'i SciShow Space, dia misaotra betsaka!
Inona no lamasinina mavesatra indrindra eto an-tany?
NY 21 JUNE BHP Iron Ore dia nametraka vaovaoizao tontolo izaofiraketana amin'ny alàlan'ny fihazakazahana ny lava indrindra arymavesatra indrindraentanafiaran-dalamby, eo anelanelan'ny toeram-pitrandrahana Yandi sy Port Hedland ao amin'ny faritr'i Pilbara any Andrefan'i Aostralia (ambany).
Manao ahoana ny lanjan'ny lamasinina mpitondra entana feno entana?
Ka ohatrinona ny alamasinina mpitatitra entanamilanja izanyfiaran-dalambynilanja 19.188 taonina (42 328,754 lbs), izay 848 taonina (1,869,519 lbs) no totalinylanjan'iny lokomotif sy 18.340 taonina (40.432.778 lbs) ny totalinylanjan'inymavesatrafiarakodia hopper.
Mandra-pahoviana aho no tokony hanana setrin'ny famelomana hoditra?
Ampiasaoindroa isan'andro mandritra ny 1 volana. Tohizo ny fitsaboana aorian'ny fitsaharana iray volana.9 Jul Desambra 2019
Inona no fitsangantsanganana lava indrindra any Etazonia?
Ny California Zephyr nodia lavitra indrindra tany Etazoniaary mamakivaky ny Rocky Mountains, ny lohasaha Colorado, ary ny Sierra Nevada.28 Aogositra 2018
kodiarana fiara campagnolo
Fa maninona no tsy ampiasaina intsony ny cabooses?
nycaboosedia fiaran-dalamby amerikana avaratra mifampitohy amin'ny faran'ny fiaran-dalamby mpitatitra entana. Ny fivoarana amin'ny fanaraha-maso sy ny haitao azo antoka, toy ny detector ny kilema an-tsisin-tsipika sy ny fitaovana farany amin'ny fiaran-dalamby, dia nahatonga ny fihenan'ny ekipa sy ny fivoahanacaboosefiara.
Mihabe ve ny lamasinina mpitatitra entana?
Na dia tsy betsaka azalamasinina lavafikarohanaentanalalànan'ny lalamby ankehitriny - 95 isan-jato no fohy kokoa noho ny 10.000 metatra, hoy ny Fikambanan'ny lalamby amerikana - mihalava ny Class Isfiarandalambynandritra ny fotoana kelikely. “Miasalamasinina lava kokoaamin'ny firenenalalambytambajotra dia tsy tranga vaovao.
Firy ny hevitra momba ny bisikileta mamirapiratra?
Hevitra 5997 mifanaraka amin'ny fikarohana nataonao. Avereno ny sivana. Nojerena eraky ny jiro ho an'ny bisikileta bisikileta, ny Brilliant Bikes dia nametraka azy ireo, ka nanafatra iray ary natolotra ny ampitso, azo atokisana ary hanafatra indray. Ny anarako dia althea serrano.ill manao an'ity…
Bisikileta tsara ve ny bisikileta tsara B L?
Raha fehezina dia tsara ny Brilliant Bikes Brilliant Bicycle Co - l-Train. Ny ankamaroan'ny fanadihadiny dia tsara. Iray amin'ireo mampiavaka azy ny mivezivezy manakaiky ny lalana malama na feno lavaka. Misaotra ny endriny sy ny tsorokelany chromoly, izay mitazona ny bisikileta tsy miova ary manana fitrohana tampoka.
Inona ny lokon'ny bisikileta mamirapiratra?
Ny minimalista sy ny olon-tiana lava dia maniry ny fijery mahazatra an'ny Brilliant Bikes Brilliant Bicycle Co - l-Train. Hita amin'ny loko roa loko: ny Hudson Blue (aingam-panahy avy amin'ny reniranon'i Hudson) sy ny Subway Grey (fanomezam-boninahitra ny fiaran-dalamby).